Asian Arts Kaftan Maxi Dhar - Dhaqdhaqaaqa
$ 57.60 $ 72.00 Waxaad kaydisaa 20% ($ 14.40)
Aasiya Aasiya Kaftan Maxi dhar ayaa ah muxaadarooyin ka soo jeeda Maxi. Dharku wuxuu isku dhejiyaa naqshad casri ah oo casri ah Qalabaynta si loo soo saaro shey tayo sare leh. Asia waxay soo bandhigtay dharka Kaftan Maxi ay siin doonto haweeney kasta oo ku dhejisa aristaan ​​casri ah.
Qaabka dharka ayaa si fiican isugu duuban oo loo tolaa. Waxay leedahay qaabab qurux badan oo midabo kala duwan leh; oo ay ku jiraan cagaar, buluug iyo buluug, oo ku qoran dhar cad oo madow. Naqshadani waxay ka dhigeysaa dharka isha-qabashada iyada oo aaney aad u iftiimin.
Koodhka joojin kaliya ka dib markii suxulka wqaylada dharka waa dhererka canqowga ee qaabka caadiga ah ee kaftan. Waxaa jira jeebado on midkood kooxda dharka. Mid ka mid ah madow cad, qaabka kale, ku daray taabasho taabasho ah ee quruxda dharka.
Dharka si sahlan ayaa loo xiri karaa waayo, Munaasabad kasta, sida ay u ciddid sanduuqyada loogu talagalay xarrago iyo roonaanta. Nidaamka dabiiciga ah ee Asal ahaan u waxyoonay wuxuu kaa dhigi doonaa inaad u istaagto dad badan sababaha saxda ah.
Length darafta: Half